Home » Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης
09.05.2020 Category: Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης
SEO αλγόριθμος na-agbagha mmelite na nzaghachi data.
3 Υπερβολική SEO ka mma SEO?
4 Ikwusi elu: Είμαι na-achọ n’ezie ịgwa gị …
Ọ bụ ezie na # 1 bụ eziokwu n’ezie, M onwe m na-eche echiche # 2 na # 3 bụ μαλακίες.
O doro anya, ihe kachasị njọ m na-ahụ na ụlọ ọrụ SEO bụ nke ahụ anyị na-ekwusi ike banyere στο Google Matt Cutts kwuru (π.χ., nb a bb ihe mbụ m zara mgbe m hụrụ post dị na CopyBlogger’s Google+).
Μα, Abughi m naanị m.
N’oge na-adịghị anya, Matt Cutts kwuru na ya Agaghị atụ anya ka njikọ sitere na ebe nrụọrụ weebụ wepụtara wepụtara iji nweta ọkwa weebụsaịtị. SEO Pressor guzobere, Daniel Tan, kwupụtara nkwupụta ahụ, tọhapụrụ ntọhapụ pịa ma jikọta na MattCutts.com ιστότοπος na iji okwu ahụ bụ "leasreepressmm".
Μα, ya Arụ ọrụ.
N’oge a ederede, MattCutts.com na-edozi # 2 na okwu ọchụchọ "leasreepressmm" (lee foto n’okpuru).
Buru n’uche na okwu ahụ "leasreepressmm" adịghị na blog nke Matt ma ihe niile ọ na – ewe bụ njikọ njikọ ntanetị nke na – abịa site na saịtị mgbasa ozi akpọrọ MarketersMedia. Nke ukwuu maka mgbasa ozi «Τύπος τύπου enweghị uru ọ bụla n’otu weebụsaịtị».
Nke a bụ nsonaazụ ọchụchọ nke “leasreepressmm” m jidere na 5 Ιουνίου 2013.
Κάτι και ματ ματς δεν υπήρχαν SEO SEO kasma; Ναι.
Ναι απλώς, laghachi na vidiyo nke kpọbatara m na post a.
M gwuru ntakịrị n’ime ụfọdụ SEC αρχειοθετήσεις na Akụkọ Google na-enweta εγώ na nkeji ụzọ anọ nke Google n’ehihie a. Ọ ga-eju gị anya ịhụ ihe m hụrụ.
«Ọtụtụ mmadụ na-eche na Google απλώς έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση και τη χροιά mgbasa ozi ọzọ. Ma nke ahụ abụghị eziokwu na Panda; ọ bụchaghị ikpe Penguin… “
"Panda na Penguin, anyị na-aga n’ihu ime mgbanwe. Οποιοσδήποτε αγώνας echegbu onwe anyị ma ọ bụrụ na anyị ejiri ego ma ọ bụ mee ego ma ọ bụ ihe ọ bụla … "
Mana nke bụ eziokwu bụ na Google απλώς εγώ mgị emelitere Panda na Penguin. Μία ị ụọnụọgụgụ ndị m wepụtara na mkpesa gbasara ego gbasara ego Google nke na-enyochaghị. Biko pịa maakata buru ibu, ndị ahụ bụ ọnụ ọgụgụ mara mma.
Kedu ụba ego a na-enweta bụ Matt Cutts na-ekwu banyere ναι?
Dokwesighi yebụ onye nghọta iji hụ na ego Το Google ήταν na-eto, na-eto ma na-eto. Companylọ ọrụ ahụ απλώς ezigbo ego na Larry Page kwuru nke a na mmeghe nke akụkọ gbasara ego 2013 Q1:
«Οποιαδήποτε άλλη χιλιομετρική σειρά 2013, na euru ruru 14,0 $ ijeri, ruo 31% afọ-afọ. Ουσιαστικά, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι μπιλι, ọtụtụ ijeri ndị ndị mmadụ gburugburu ụwa. "
Enweta ego site na ebe nrụọrụ weebụ Google mụbara maka και 3,25 gara aga. Onu ogugu ndi mmadu nw bu bu 25% (dika onu ogugu, Google achoputa ego ya dika otutu 3).
N’ime afọ 3.25 a, naanị otu ọdịda na mkpokọta Google, bụ nkeji iri na ise 1 afọ 2013 (ugbu a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 2 afọ mgbe Panda gasịrị ụwa). Να 2013 Q1, ngụkọta ego Google kwụrụ na ngụkọta kwụrụ (QoQ) sitere na 14,419 $ nde gaa $ 19,969 nde, ịdịda 3% (ọnụọgụ squrey).
Ọ bụrụ na ị na-elekwu anya n’elu okpokoro ahụ, anyị na-ahụ "Εγώ ένας ιστότοπος na-enweta na nkwụnye ụgwọ" Κάντε κλικ "(nke gosiri na-acha uhie uhie).
Kedu ụgwọ a na-akwụ ụgwọ; Dika okwu Google kwuru:
Nchịkọta ụgwọ κλικ, nke gụnyere ntinye metụtara mgbasa ozi jere ozi na saịtị Google na saịtị nke ndị òtù anyị.
Νσαγκάρμ; Adwords na ego Adsense.
Εσείς ụnụ ọgụgụ ndị ahụ si arụ ọrụ nke ọma. Ιστότοπος na 2010 ruo 2013 Q1, ntakịrị YoY kachasị na ntanetị akwụ ụgwọ (gụọ Adwords na Adsense) bụ 15%. Ntinye ego ntinye aka nke Google kwalitere na 28% (nke ahụ ka ọ bụrụ 13% bawanye) ozugbo Google Panda jere ụwa (Panda 2.0) na Eprel 2011.
Ματ Κοτς και δεν γίνονται ik bụla gbasara mmasị Panda na Penguin. Ihe si na Panda pụta bu ihe doro anya, Google απλώς εγώ karia mgbe mmelite Panda mechara. Ego Google nwetara site n’itinye Adwords na Adsense mụbara ụba mgbe Panda 2.0 na mmelite Penguin gasịrị.
Έχουμε να κάνεις, να κάνεις, αλλά να είσαι ένα Excel. Rịba ama na uto nzuzu na ntinye ego Google ji akwụ ụgwọ mgbe Panda 2.0 gasịrị.
Υπερβολική SEO ka mma SEO?
N’ime vidio ahụ, Matt Cutts kwukwara banyere otu SEO na-emesi ike na njikọ njikọ yana μηχανές αναζήτησης. O nyeziri ndụmọdụ SEO ga-elekwasị anya n’ihe ndị ọzọ, dịka mgbasa ozi mmekọrịta na onye ọrụ weebụ, kama.
Chere obere oge. Ναι απλώς, Matt Cutts na-agwa SEOs ọ ghara ilekwasị anya na … SEO?
Ndị ọkụ azụ, azụ azụ. Ndị ọrụ ubi, na-akụ mkpụrụ. Na SEOs, nke ọma, gaa na mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi na-eme websitefọd website ιστότοπος τροποποιήσεων.
Για παράδειγμα, mgbasa ozi mgbasa ozi na tweaking website dị oke mkpa. Μα, χα, ετσι. SEO, SMM (mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na eze), SMO (mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na eze), na ahịa na-abaghị uru bụ akụkụ nile atụmatụ ahịa weebụ. Gịn SEO απλώς SEO ga-eji lekọta ihe banyere SEO ma rụọ ọrụ karịa SMM?
SEO na-eche na ebuli saịtị ma nya nyocha dị mma na ọdụ ogologo oge. Na, njikọ ndị na-abata na-arụ ọrụ dị mkpa mgbe niile na ọkwa saịtị mgbe Florida emelitere na 2003. Ezi ma ọ bụ ihe ọjọọ; acha ọcha ma ọ bụ nwa ojii. Njikọ azụ bụ ihe na-eme ma ọ bụ na-agbaji saịtị; na njikọ bụ ihe anyị na-ebute na-ewu. Ọ bụrụ na azụ njikọ abụghị ihe dị mkpa (dị ka Mat kwuru), mgbe ahụ gịnị mere Ịzụ ahịa Google na – διαφημιστικά μηνύματα bara uru?
Ikwusi elu: Είμαι na-achọ n’ezie ịgwa gị …
Ολοκληρώθηκαν τα is ga-enwe mmasị na isiokwu m. Gwa ma gwa m ihe ị na-eche banyere nke a, ana m emeghe maa mkparịta ụka.